Mpamatsy Laser Cutter azo itokisana, Vahaolana Laser matihanina
Manamora ny famokarana Sublimation
>> Mikaroka bebe kokoa
Ny fitaovanao vita pirinty
R&D ho an'ny Cordura
Ao anatin'ny 3.2 metatra ny sakany
Noforonina ho an'ny Automation
Ny hoavin'ny fanapahana tamin'ny laser
MimoWork dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana vahaolana laser ho an'ny fanodinana akora tsy metaly eo amin'ny sehatry ny dokam-barotra, fiara & fiaramanidina, lamaody & akanjo, fanontana nomerika, indostrian'ny lamba sivana, sns.
Manolotra milina fanapahana laser manokana sy manokana ho an'ny karazana fitakiana izahay mba hanatsarana ny fiasan'ny mpanjifa sy ny famokarana.
Ny fomba fanapahana tsotra indrindra ho an'ny vokatra fandokoana sublimation.
Famantarana ny contour amin'ny drafitra marina sy ny fanapahana contour tsara ho an'ny lamina sy endrika rehetra.
Fahombiazana avo miaraka amin'ny automotion avo lenta amin'ny famahanana, fakana sary ary fanapahana contour.
Manam-pahaizana manokana amin'ny fanapahana fitaovana mora azo.
Ny fanodinkodinana na ny fihenjanana rehetra dia azo fantarina amin'ny Mimo Contour Recognition System ary ny tapany vita pirinty dia hotapahana amin'ny habeny sy ny endriny marina.
Ny famolavolana vatana voahidy tanteraka no mamaritra ny antoka fiarovana amin'ny famokarana fanapahana
Ampifandraisina amin'ny hafainganam-pandeha avo, fampisehoana azo itokisana, ary endri-javatra mahafeno fepetra, fanodinana moramora ny baiko tsirairay.
Masinina ambaratonga fidirana tsara indrindra ho an'ny akora mivaingana lehibe.
R&D ho an'ny fanodinana acrylic sy hazo.
Mamela ny fampidinana sy fandefasana tsy voafetra.
Hafainganam-pandeha avo sy fanapahana mazava tsara.
Safidy tsy manam-paharoa ho an'ny fanapahana fitaovana malefaka.
Loha laser roa mihetsika tsy miankina, avo roa heny ny fahombiazanao (tsy voatery).
Ny Nesting Software dia mitahiry ny fitaovanao amin'ny ambaratonga lehibe indrindra.
Manapaka tsy tapaka miaraka amin'ny famahanana mandeha ho azy.
Mpapaka Laser Flatbed 250L
Mety amin'ny fanapahana lamba ara-teknika.
Ny fiasa mahery vaika dia mamorona versatility tsy misy farany.
Teknolojia fanontana ink-jet tsy mifandray (tsy voatery).
Ny haben'ny latabatra miasa lehibe dia azo zahana.
Tsara ho an'ny marika na oroka-manapaka workpieces tsy metaly toy ny hafanana famindrana sarimihetsika.
Ny fifantohana 3D Dynamic dia manapaka ny fetra ara-materialy.
Manidina tamin'ny laser marika mba hananganana tsipika fivoriambe (tsy voatery).
Tena ilaina ny consulting mialoha ny fivarotana mba hianarana momba ny filanao sasany.Izay mety aminao no tsara indrindra!
Ny milina laser MimoWork dia mirakitra fangatahana isan-karazany amin'ny sehatra samihafa.
Safidy laser fanampiny sy multifunctional dia azo ampiasaina amin'ny fepetra takiana samihafa.
MimoWork Service dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiantohana ny fampandehanana azo antoka amin'ny milina laser-nay mba hahatsapan'ny mpanjifanay ho miavaka foana.
Ny ekipan'ny MimoWork Service dia mametraka hatrany ny filan'ny mpanjifantsika ho ambonin'ny tenantsika hatrany amin'ny dingana voalohany amin'ny fitiliana ara-pitaovana ka hatramin'ny fanombohana ny rafitra laser.
Jereo ny fitaovana rehetra
Nandritra ny 20 taona, ny MimoWork dia natokana hanosika
ny fetran'ny teknolojia laser miaraka amin'ny orinasa vaovao
Jereo ny fangatahana rehetra
Manapaka Patch Miaraka amin'ny MimoWork
Laisoa amin'ny Laser Cut Patch Ny akanjonao amin'ny lamaody miaraka amin'ny Patches Laser Cut dia azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra ho hitanao izy ireo, ao anatin'izany ny pataloha jeans, palitao, t-shirt, sweatshirt, kiraro, kitapo, ary na saron-telefaona aza.Izy ireo...
Ataovy izany avy hatrany amin'ny alàlan'ny sokitra Laser PCB
Vitao avy hatrany izany amin'ny alàlan'ny Laser PCB Etching PCB, mpitatitra fototra amin'ny IC (Integrated Circuit), dia mampiasa ny dian conductive mba hahatongavana amin'ny fifandraisan'ny faritra eo amin'ireo singa elektronika.Nahoana izy io no karatra fizaran-tany vita pirinty?ny condu...
Inona no mahasamihafa ny mpanao sokitra laser amin'ny mpanapaka laser?Ahoana ny fomba hifidianana ny milina laser ho an'ny fanapahana sy ny sokitra? Raha manana fanontaniana toy izany ianao dia mety mieritreritra ny hampiasa vola amin'ny laser...
Fepetra fanamafisam-peo ho an'ny CO2 Laser System amin'ny ririnina
Famintinana: Ity lahatsoratra ity dia manazava indrindra ny ilàna ny fikojakojana ny ririnina amin'ny ririnina amin'ny ririnina, ny fitsipika fototra sy ny fomba fikojakojana, ny fomba hifidianana antifreeze amin'ny milina fanapahana laser, ary ny zavatra ilaina ...
Mahita teknolojia laser miaraka amin'ny MimoWork
te hahalala bebe kokoa momba ny jiro maoderina ve ianao?
Avy eo misoratra anarana amin'ny gazetinay.